Himalaya Dainik » यी ब्यक्तीले एक शब्द बिर्सिंदा ३१ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुदैँ !
यी ब्यक्तीले एक शब्द बिर्सिंदा ३१ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुदैँ !
एक जना अर्बपति कम्प्युटर प्रोग्रामरले एउटा शब्द बिर्सिएकै कारण ३१ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। उनले त्यो शब्द सम्झिन सके तत्कालै उनको सबै पैसा फिर्ता आउँछ तर त्यो शब्द सम्झिन नसके उनको करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुनेछ ।
न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोका स्टिफन थोमसले एक पासवर्ड बिर्सिए । पासवर्ड सम्झिए उनी अर्बपति बन्नेछन् किनकि त्यो पासवर्डबाट उनले आफ्नो डिजिटल पर्स खोल्न सक्नेछन् जहाँ करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ ।
स्टिफनले वर्षौं पहिले क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइन किनेका थिए । यो बिटक्वाइन उनको डिजिटल वालेटमा छ जसको पासवर्ड उनले बिर्सिएका छन् । अहिले १ बिटक्वाइनको मूल्य ३७ हजार ५३० डलर छ । उनको डिजिटल वालेटमा कूल ७ हजार २ बिटक्वाइन छ जसको मूल्य करिब २६ करोड २८ लाख डलर झण्डै नेपाली मुद्रा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
आइरन नामको सानो हार्ड ड्राइभ खोल्न चाहिने पासवर्ड स्टिफनले बिर्सिइसकेका छन् । आइरनभित्र अर्को एउटा डिजिटल साँचो छ जसलाई प्राइभेट की भनिन्छ । यो प्राइभेट कीले मात्र उनको डिजिटल पर्स खोल्न सकिन्छ जसमा बिटक्वाइन राखिएको छ । स्टिफनले बिटक्वाइन किनेर आइरनको पासवर्ड एउटा कागजमा लेखेर राखेका थिए । कुनै समय बिटक्वाइनको मूल्य धराशायी भएको थियो त्यसैले स्टिफनलाई यसप्रति चासो रहेन । कागज पनि हरायो ।
यो मुद्रा बनाउने व्यक्तिको नाम सातोसी नाकामोतो भनिन्छ तर उनी को हुन् र उनको वास्तविक नाम यही हो वा होइन भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन
अहिले मूल्य आकाशिएपछि स्टिफनलाई आफ्नो डिजिटल धन याद आयो तर उनले त्यसलाई हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले पासवर्ड सम्झिने हरसम्भव प्रयास गरिसकेका छन् । समस्या यसकारण पनि छ कि उनले १० पटक मात्र प्रयास गर्न सक्छन् । यदि १० पटकमा उनले सही पासवर्ड राखेर आइरन खोल्न सकेनन् भने उनको वालेट सदाको लागि बन्द हुनेछ । उनले प्रायः जस्ता किसिमका पासवर्ड प्रयोग गर्छन् ती पासवर्डबाड ८ पटक प्रयास गरिसकेका छन् । र, हरेक प्रयास विफल भए । अब उनीसँग २ मौका मात्रै बाँकी छन् ।
अब उनले २ पटक गलत पासवर्ड राखेर वालेट खोल्ने प्रयास गरे भने उनको पैसा कहिल्यै फर्किन नसक्ने गरी स्वाहा हुनेछ । बिटक्वाइनको कुनै नियामक संख्या छैन । न कुनै कम्पनीको नियन्त्रण छ । यो मुद्रा बनाउने व्यक्तिको नाम सातोसी नाकामोतो भनिन्छ तर उनी को हुन् र उनको वास्तविक नाम यही हो वा होइन भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन ।